Arsenal oo loo sheegay inay bixiso lacagta lagu burburin karo qandaraaska xiddiga Kooxda Atletico Madrid ee Thomas Partey – Gool FM
(London) 07 Agoosto 2020. Kooxda Atletico Madrid ayaa la soo warinayaa inay ku celisay inaysan ka iibin doonin Thomas Partey Arsenal haddii aysan bixin 50 milyan oo euro oo u dhiganta 45.5 milyan oo gini oo ah lacagta lagu burburin karo qandaraaskiisa.
Xiddiga xulka qaranka Ghana ayaa la rumeysan yahay inuu yahay mid ka mid ah xiddigaha weerarka ee uu bartilmaameedsanayo xagaagan Tababare Mikel Arteta, waxaana soo raaca kubbad sameeyaha kooxda Barcelona ay leedahay ee Philippe Coutinho iyo xiddiga beeca xorta ugu biiri kara maalmaha soo aaddan Kooxda Gunners ee Willian.
Arsenal ayaa wadahadallo la furtay Partey horraantii sanadkaan sida uu xaqiijiyey Aabihiis, laakiin rajo kasta oo ay kula saxiixan karto 27-sano jirkaan ayaa ku xiran inay Atletico Madrid siiso lacagaha ay dalbanayso ee lagu burburin karo heshiiska xiddigan.
Suxufiga kubadda cagta ee Fabrizio Romano ayaa xaqiijiyey in Partey uusan meelna aadi doonin xagaagan illaa laga bixiyo lacagta lagu jabin karo qandaraaskiisa oo dhammaystiran.
Kooxda reer Spain ee Atleti ayaan sidoo kale dooneyn inay dhageystaan nooc kasta oo dalabyo kale ah oo uu xitaa ku jiro heshiis macquul ah sida inay isku daraan lacag kaash ah iyo Matteo Guendouzi.
Haddii ay ku guuldareystaan inay heshiis la gaaraan kooxda reer Spain, Arsenal ayaa bedelka Partey u jeesan doonta ciyaaryahanka khadka dhexe ee Roma, Amadou Diawara.